UPAUL GREENE UTYHILA IHOLOMARK YEKRISIMESI YECO-STAR - IINDABA
UPaul Greene utyhila iHolomark yeKrisimesi yeCo-Star
UPaul Greene utyhile nje ukuba ngubani oza kuba ngumlingane wakhe oza kuba kwifilimu yakhe entsha yeHallmark. Ngelixa ikamva lomlinganiswa wakhe xa Iifowuni Intliziyo iqhubeka ingaziwa, abalandeli bayavuya kuba ebandakanyeka kwimveliso entsha kraca yeHallmark.
UGreene wabelane ngokuba uMarisol Nichols uyiNkwenkwezi yakhe
U-Greene wenza isibhengezo kwiphepha lakhe le-Instagram xa wabelana ngento yokuba uMarisol Nichols uzakuba yinkwenkwezi yakhe.
Uye wathetha kwividiyo yakhe: Kulungile, ke ndisemva kwemidlalo kwaye ubundibuza ukuba ngubani na umntu endisebenza naye. Wenza iinzame zokuzigcina epholile phaya. Ke ngoku, nantsi iMarisol Nichols. Marisol, uqhuba njani?
Uphendule watsho etshisa. Ngokucacileyo yayithandwa kakhulu njengoko uNichols wayezibetha kwividiyo yonke.
Senza ikuki yeKrisimesi, uGreene wabelana, ngelixa ngokukhawuleza kubandakanya ukuba uNichols wayekhazimla kwaye engazange abile.
U-Greene wongeze umthi omiliselwe kwiseti. Ngaphezulu kwevidiyo, uya kuba nakho ukubabona bedanisa ngokudibeneyo emva kokubeka ipleyiti yeicookies zeKrisimesi.
Kwi-Instagram, umntu omnye uphendule wathi: Ukurhanelwa kuphelile okokugqibela kwaye yinto yothusayo leyo! Ndivakalelwa kukuba niya kuba mnandi ngokudibeneyo! Andikwazi kulinda!
Umboniso bhanyabhanya ubizwa ngokuba 'yiKrisimesi CEO'
Ifilimu yeKrisimesi yaziwa ngokuba yi-CEO yeKrisimesi. Kukho ithuba isihloko sinokutshintsha ngenqaku lokuqala kwiHallmarkmark.
UNichols ukongeza ekwabelwana ngevidiyo malunga nefilimu entsha, esithi uGreene njengenkwenkwezi yakhe kubalandeli bakhe.
Uye wathi: Kulungile, ukuba uyabuza, ndikwigumbi lethu. Le yinkwenkwezi yam, uPaul Greene. Yithi usuku olungileyo. Babelana ngokuhlekisa ngokudibeneyo kwaye wakhankanya, Kwaye senza ifilimu yeKrisimesi.
UGreene wongeze, Sinjalo. Senza 'i-CEO yeKrisimesi' e-Ottawa…
UNichols ukhankanyile: 'Umphathi weKrisimesi' kwaye uqikelele ukuba ngubani i-CEO ??!
Emva koko wazikhomba kuye njengoko uGreene watshoyo ukuba ayinguye.
Omnye umlandeli, ebhekisa kwifilimu yakhe yaseHallmark kwiinyanga ezili-12 zokugqibela, ubhale wathi: Ndixelele umlinganiswa wakho anokuba nesiphelo esihle? Kutheni inyani ndingasakwazi ukuma ndilila kwakhona❤️🥰
URuth Hill, osebenza noGreene, uphendule wathi:Ndonwabile ukunibona nonke kumdlalo bhanyabhanya !! Ndikuthandile Marisol kwifilimu yokugqibela ye-12 yeHallmark yeKrisimesi kwaye uye waba zizinto eziphambili ze-Riverdale !!!! Awukhange ukhutshwe kwaye awunakukubona kwifilimu uguqula enye kuzo zonke iimpazamo zam (onokuba ngumphathi wam) le filimu iza kuba yiROCK.
U-Greene wenza ifilimu ngelixa ekude neqabane lakhe, uKate Austin, okhulelweyo okwangoku. Utshilo uGreene Kwintlalo yoluntu ukuba yayinamandla ukuba kude noKate kanti ukhulelwe, nangona kunjalo kufuneka kwenziwe ifilimu yeKrisimesi.
U-Greene wazise ngoJulayi ukuba yena kunye nesoka lakhe, uKate Austin, balindele umntwana. Balindele ukuba umntwana wabo oyinkwenkwe uza kuzalwa ngoKwazisa, Abantu baxelile.
Akucaci ukuba leliphi ixesha elide elibambe umlinganiswa wakhe uCarson xa ebiza Intliziyo, nangona kunjalo. Ukuqokelelwa okwangoku kukufota ixesha le-9 kwindawo ekhethekileyo yaseCanada, kwaye uGreene akakhange abonwe kuseti oko kwaqala ukufota.
Izigaba: Amazon-Prime Hulu Iindaba
U-Deepika Padukone utshisa 'ikhalori' kunye no-PV Sindhu kwinkundla ye-badminton; wabelana ngemifanekiso kumdlalo
Ngaphandle kwemidlalo yakhe ebalaseleyo kwiscreen sokubonisa, uDeepika Padukone uhlala evakalisa uthando lwakhe kumdlalo we-badminton. U-Deepika, onaye
I-Roadhouse Romance I-Soundtrack: ULauren Alaina Iingoma ezipheleleyo, iiVidiyo
UKristen Doute uthi 'Akayena' ubuhlanga 'Emva' kweMigaqo yeVanderpump '
UDaniel Weber-Ubungakanani benethi, i-Bio, iWiki, ubudala, i-Career, ubude, umhla wokuzalwa
UJames Van Der Beek, aBazali abaninzi baFumana iNyaniso ngamava okuFunda okude
Ubhuti omkhulu we-23 Abaphangi: Ngubani ophumelele amandla eVeto yeveki ye-10?
UChristina Anstead kunye noMyeni uMbovane ohlukanise unyaka omnye emva kokwamkela umntwana wabo
UMike Sorrentino Ukwabelana ngemifanekiso yoNyana u-Romeo
Umgca wobucwebe weRHOC weBraunwyn Windham-Burke uxhasa ulutsha lwe-LGBTQ
Rick and Morty Ixesha lesi-5 leTreyini ityhila uMhla wokuQalwa
UFatima Salaria ujoyina uMthendeleko we-Edinburgh we-TV njengoSihlalo oLawulayo
I-Paris Jackson isete ukuvela kwiBali elilandelayo 'leMbali yaseMelika'
yirusi umfula osekwe kwibali eliyinyani
Ngaba ii-sams zivuliwe ngosuku lwesikhumbuzo
UJennifer lahmers iindaba zeempungutye
Indoda yokugqibela emi ixesha loku-1 isiqendu 1
ibhola liwe nini ixesha embindini